Iko kusimbiswa kwedhora kunochinja sei mari yako wega? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemhedzisiro yemamiriro azvino ehupfumi nyika iri kusangana nayo parizvino kukosheswa kwekukoshesa kwedhora reAmerica kurwisa euro. Maitiro akakosha seaya ari kuitika kuArgentina kana kukwirisa mu mutengo wemafuta iri kukonzera kusimbiswa kwemari yekuNorth America. Iyi shanduko yemutengo wekutsinhana ine mibairo yakanaka uye yakaipa pahupfumi hwako wega kubva zvino zvichienda mberi uye uchafanira kuzviziva kuitira kuti iwe utore mukana weichi chakakosha mamiriro ezvinhu anomuka mumusika wekuchinjana kune dzimwe nyika.
Kusvikira mazuva mashoma apfuura, mamiriro akajairwa akasiyana zvachose. Mune mamwe mazwi, simba rakakura reeuro rinopesana nedhora. Asi kubva kusagadzikana kwaenda kuArgentina uye Middle East, mamiriro acho achinja zvakanyanya. Chimwe chezvikonzero chekutsanangura ichi chokwadi chakakonzerwa nenyaya yekuti United States mari inoshandisa pokugara kukosha pasi pekumanikidzwa kubva kumisika yemari. Iko chikamu chakanaka chemari inoyerera yevatyairi yakanangiswa kune ino yakakosha mari yemari. Kunyanya nekuti inopa chengetedzo kune vanoita mari.
Ehe, iyo misika yequity haina kudzivirirwa neaya mafambiro mune mwero wekutsinhana kwemari huru dzenyika. Kana zvisiri, pane kudaro, ine zvakakura maitiro aunogona kutora mukana kuburikidza nekushandisa kweimwe nzira dzekudyara. Saka nenzira iyi, unogona ita purofiti kumipiro yako yemari. Nekudaro, iwe haugone kukanganwa kuti mumazuva ekutanga zvinogona kukonzera kumwe kuvhiringidzika nezve zvaunofanira kuita neyako mari kubva zvino zvichienda mberi.
1 Kukwira kwedhora kunopesana neeuro
2 Kutengesa mashandiro kana kukurumidza kwazvo
3 Iko kukwira kwedhora kunokanganisa sei?
4 Zvimwe zvinodhura zvinotengeswa kunze kwenyika
5 Kukanganisa pamakambani
6 Investment mumadhora ekuUS
Kukwira kwedhora kunopesana neeuro
Mukutaura, kusimbiswa kwedhora reUnited States kurwisa mari imwechete yeEurope hakuna kushata kana kunaka. Kana zvisiri, zvese zvinoenderana nekwaniso yako yekuita kune ino mamiriro matsva anomuka mune hupfumi hwenyika uye kunyanya mumusika wekuchinjana kwekune dzimwe nyika. Iwe une zano rinoshanda kwazvo kutora mukana weichi chinoratidzika kunge chenguva mafambiro uye ndiko kuenda ku misika yemari. Mubairo wezvaunoita ungave unogutsa, asi chero bedzi iwe uchiziva kuti iwo mashandiro ane yakawanda njodzi.
Iyi njodzi inowedzera kana iwe usina imwe huwandu hwekufunda kushanda nemhando idzi dzemisika. Nekuti ichokwadi chose kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana iwe unogona kusiya maeuro mazhinji munzira. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti kana musika wemari uchionekwa nechimwe chinhu, chiri nezvayo kusagadzikana kukuru. Izvo zvinonyanya kutaurwa kupfuura mune mimwe misika yemari. Semuenzaniso, pamusika wemasheya kana yeavo mbishi zvigadzirwa kana simbi dzinokosha. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kuunza ruzivo rwakawanda murudzi urwu rwemabasa ekudyara.
Kutengesa mashandiro kana kukurumidza kwazvo
Kana iwe uchida kutora mukana we mafambiro kukwira kwedhora reUSA kuchipesana neiyo euro sarudzo inogutsa kwazvo kusarudza mabasa ekutengesa. Ehe saizvozvo ndeimwe yeiyo mabhizimusi mikana kuvandudza chirevo chako chemari kubva ikozvino. Hazvishamise kuti musika wemari unoshanda chaizvo uye uri kuzadza zuva nezuva. Kunyangwe panguva dzemanheru kuburikidza neramangwana zvichibva paiyi nhumbi yemari. Kana iwe uine ruzivo rwakakosha, iwe unogona kuyedza kuita aya akakosha mashandiro, asi nguva dzose nehungwaru hukuru kudzivisa njodzi dzisiri madikanwa.
Izvo chaizvo kuburikidza nekutengesa kuti iwe unogona kusvika pamusika wemari. Uye zvingave zvishoma sei, natsiridza nzvimbo dzako kuburikidza nekusimbiswa kwedhora kurwisa euro. Pamusoro pemamwe marudzi ezvigadzirwa zvemari asingatore mhando iyi yekufamba nehukama hwakadai. Kunyanya, kana rally mumari yeUS isiri iyo kubatana kwekubatanaInoenderera kuburikidza nemwedzi mishoma inotevera kana kunyange makore. Muchiitiko ichocho, zvichave nyore kwazvo kutengesa aya maficha emari. Iwe haugone kukanganwa iyi ongororo kana iwe uchida kuita iyo kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino zvichienda mberi.
Iko kukwira kwedhora kunokanganisa sei?
Kana iwe ukatarisa kudivi rakajeka, iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekufungisisa iyo zvimwe zviitiko zvakanaka kune zvako zvemari. Iwo akanyanya kudarika zvaungafanoona kubva pakutanga uye zvirokwazvo unogona kubatsirwa panguva ino yezvinoitika iyo musika wemari unopa panguva ino chaiyo inogara. Eya, imwe yemhedzisiro yakatwasuka yemubhadharo mumari yeUS inogara muchinhu chekuti kutengeswa mukati meEuropean Union kuchabatsira.
Ichi chiito chinokonzeresa makambani akanyorwa pane iyo mari yakasiyana-siyana uye kuti havana chakasimba chakatumira kunze kwenyika vanogona kusimudzira zvinzvimbo zvavo mumisika yemari. Izvo chaizvo kune iyo kirasi yekuchengetedzeka kwaunofanirwa kuenda kana iwe uchida kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Nekuti hunhu hwavo huchave nani pane kuremekedza makambani anotengesa kunze. Hazvishamisi kuti ivo vachatambura huremo hwedhora rakasimba zvakanyanya kupfuura nakare. Ndokunge, zvese zvinoenderana nehunhu hwechitoro chaunosarudza kubva ikozvino.
Zvimwe zvinodhura zvinotengeswa kunze kwenyika
Kune rimwe divi, kune mhedzisiro inopesana. Ndokunge, kuti mamiriro ezvinhu aya angakukuvadza sei mumusika wemari. Imwe yemaitiro akanyanya kukuvadza ndeayo ane chekuita nenyaya yekuti zvigadzirwa zvaunotenga zvichadhura kupfuura nakare. Nekuti zvirokwazvo, vatengi veSpanish simba ravo rekutenga richaderedzwa, sezvo vachabhadhara mari yakawanda yezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika. Mamwe matunhu anoenderana nezvinhu izvi ndeaya: chikafu, mishonga, machira, midziyo yemumba uye mota. Kusvika pakuti ichazoratidzwawo mumisika yemari.
Chimwe chikamu chinogona kukanganiswa nemamiriro emari yekuAmerican ndicho chinobva chako anoenda kunze kwenyika. Kusvika pakuti ivo vanhu vanoenda kuUnited States kunoshanda kana kunakidzwa, vachabhadhara mari yakawanda kumatikiti avo endiza, dzimba dzekugara uye zvese zvinodhura zvinoitirwa kunzvimbo yekushanya iyi. Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti kuwedzera kwemutengo wemafuta kunogona kusimudzira iwo mazinga eaya masevhisi. Sezviri kutoitika nevamwe vavo. Hazvishamise kuti kufamba kubva ikozvino zvichienda kuchange kuri pasi pehurongwa hwakawanda hwemari.
Kune rimwe divi, vanamuzvinabhizimusi vekuSpain uye kazhinji vese maEuropean, vanoburitsa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika vachabatsirwa, nekuti ivo vachakwanisa tengesa zvakachipa zvigadzirwa izvi, izvo zvinobva zvangoita kuti zvioneke zvakanyanya mumusika wepasi rose. Mhedzisiro iyi inoendeswa pakarepo kune kukoshesa kukuru kwayo mabhizinesi mitsara. Uye kuti mune yakatarwa nyaya yemakambani akanyorwa anozoratidzwa pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo dzavo kana izvo zvakafanana, mutengo wezvikamu zvavo uchakwira. Chinhu icho vashoma uye vepakati varimi vanovhura zvinzvimbo mune zvimwe zveaya marekisheni emusika zvirevo vanogona kutora mukana.
Kubva pane ino mamiriro, musika unogona kuburitsa chaiyo mabhizimusi mikana kwaunogona kuwana mihombe mihombe mukuita kwako kose pamusika wemasheya. Nepo pane izvo zvinopesana, iwe zvakare unorasikirwa nemari yakawanda kana ukasasarudza akanakisa ezvakataurwa izvo zviripo mumusika wemari. Kunze kwehumwe hunyanzvi uye pamwe kunyangwe kufunga kwakakosha. Ichi ndicho chimwe chezviitiko zvinogona kuvhurwa kwauri izvozvi maererano nezvaunofanirwa kuita nemari yako yekudyara.
Investment mumadhora ekuUS
Zvimwe zvinokurudzira kuchengetedza mumadhora? Zvakanaka, mukuita, inogona kunge iri imwe yenzira dzaunogona kunongedza chiitiko ichi chiri kukuvhurira iwe mumusika wemari panguva ino. Ehezve, iwe haugone kukanganwa kuti kune mazana ezviuru evashambadzi vadiki nepakati vane vangangoita chikamu chavo chekuchengetedza mumadhora. Vanozviita kubva kune akasiyana zvigadzirwa zvemari zvakagadzirwa nemabhangi. Kubva pakutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa kusvika Investment funds kana kunyange zvigadzirwa zvine hukasha.
Hazvishamisi kuti iyi ndiyo nzira yakasarudzika yekutenga madhora mashoma nemari "kuisa pasi pemetiresi." Chiyero icho chakanangana zvinokudzivirira kubva kumafambiro asingadiwe. Inotarisirwa kune yakatsanangurwa chaizvo investor chimiro uye ndeye munhu anochinjika anoziva nzira yekuenderana nezviitiko zvitsva zvakakonzera kufamba mudhora reUS.
Kune rimwe divi, zvese zvinoenderana nemakumi ezviuru zvezvinhu, sekunge paine dzimwe nzira dzekudyara, mitemo yemitero yenyika yakatarwa, uye zvisarudzo zvinopesana nenjodzi inoratidzirwa neimwe nzira yekudyara. Chinhu chisingagare chiri nyore kana chakareruka uye chinogona kugadzira zvinopfuura kamwe kusagutsikana kubva panguva ino chaiyo. Chero zvazvingaitika, simba remari iyi chiitiko chitsva chaunofanira kufunga nezvekudyara kubva zvino zvichienda mberi. Usakanganwe kuti uwane yakanyanya kudzoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iko kusimbiswa kwedhora kunochinja sei mari yako wega?